Ronaldinho oo ku biirray Milan, Modric oo u dhaqaaqay Spurs & Saxiixyadii la sameeyey xagaagii 2008 ee noqday kuwo guuleystay – Gool FM
(Yurub) 28 Mar 2020. Maalmihii ugu dambeeyay, waxaan idin la wadaageynay sheekooyin ku saabsan qiimeynta lacagaha ciyaartoyda ee sanadihii la soo dhaafay ee qarnigan.
Suuqii xagaaga ee 2008, kooxaha waa weyn ee qaaradda Yurub ayaa sameeyay saxiixyo kala duwan, waxaana qormadan ku eegeynaa saxiixyadii ay kooxaha Yurub sameeyeen sanadkaas ee guuleystay.
Naadiga Premier League ka ciyaarta ee Tottenham ayaa la soo saxiixatay Laacibkii ay ku faa’iidday ee Luka Mordic, kaasoo ay ka soo qaateen kooxda Dinamo Zagreb.
Si la mid ah, Kooxda reer Talyaani ee AC Milan ayaa iyaduna sanaddaas sameysay saxiix kale oo cajiib ah, iyagoo gacanta ku soo dhigay xiddigii reer Brazil ee Ronaldinho.
Haddaba qaybtan hoose waxaan idin kugu soo bandhigeynaa afartii saxiix ee ugu wanaagsanaa sanaddii 2008, iyadoo aan saldhig uga dhigi doonno wax qabadkii ay la yimaadeen kaddib ku biiristoodii kooxihii ay ka mid noqdeen.
Ronaldinho ayaa ku biiray AC Milan, waxaana naadiga reer Talyaani ay Barcelona kaga soo qaadatay adduun lacageed dhan 24.15 Milyan oo euro.
Xiddigii hore ee xulka qaranka Brazil ayaana noqday mid kas oo dhalaalay qiimihiisii, illaa ugu dambeyn 2011-kii uu ku biirray kooxda Flamengo.
Laacibka khadka dhexe ee Modric ayaa dhankeeda lacag qiimo yar oo dhan 21 Milyan oo euro ku yimid Spurs waxaana uu ka soo dhaqaaqay Dinamo Zagreb, ilaa ugu dambeyn uu sanadkii 2012-kii ka tagay kooxda reer England oo uu ku biiray naadiga Real Madrid oo uu illaa iyo hadda ku sugan yahay.
Saxiixyada sanadkaas la sameeyey ee guuleystay waxaa ka mid ah Robinho oo inta ka soo dhaqaaqay Real Madrid ku mid noqday kooxda reer England ee Manchester City, waxaana uu ku soo dhaqaaqay adduun dhan 43 milyan oo euro.
Dani Alves ayaa ka mid ah saxiixyadii waa weynaa ee sanadkii 2008 la sameeyey oo noqday kuwo lagu faa’iiday, waxaana xiddigan reer Brazil uu ka soo dhaqaaqay kooxda Sevilla isagoo ku biiray Barcelona.
Guulo waa weyn ayuu Alves la gaaray kooxda reer Spain ee Barcelona illaa markii dambe uu sanadkii 2016 ka tagay kuna biiray naadiga reer Talyaani ee Juventus.
Heshiisyadii dhacay 2008 ee noqday kuwo guuleystay ama lagu faa’iiday:-
Robinho → Man City – €43m
Dani Alves →Barcelona – €35.5m
Ronaldinho → AC Milan – €24.15m
Luka Mordic → Tottenham – €21m
Lionel Messi oo Ronaldinho ku garaacay xiddigga ugu gambiska wanaagsanaa kubadda cagta